ChiShona: Kufanana kwe ANC ne ZANU ZANU PF munhau dze Ivhu (Opinion) - Vernac News
Kufanana kuripo pakati pebato reANC nereZANU PF kuri kubuda pachena zuva rega.
Mapato maviri aya akatarisana nesarudzo dzemutungamiriri wenyika mamwedzi mishomanane iri kutevera, uyu ari kushandisa nzira dzimwe chete dzekutsvaga vanovhota vatsva.
Vhiki rapera Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe neZANU PF VaRobert Mugabe vakavimbisa, kumusangano kuMarondera, vatsigiri vavo kuti vachatora mindi yasara mumaoko evarungu vachiipa kune vechidiki vasina minda. Va Jacob Zuma, mutungamiriri weSouth Africa nebato reANC vari kutarisana nekupikiswa kuzhinji kubva zvavakatanga kubuditsa pachena hurungwa hwekutora minda kubva kuvarungu pasina mibhadharo.Kutorwa kweminda kusina kunyatsorongeka pamwe chete nechiwoko muhomwe nekusatongwa zvakanaka kwenyika ndizvo zvinganzi zvakakonzera kuparara kwenyika yeZimbabwe. Nyangwe zvazvo kwapera makore anopfuura gumi Zimbabwe yatora minda, nyaya yevhu ichingori kushandiswa mukutsvaga vatsigiri mune zvematongerwo enyika, nemukukurudziri ruzhinji. Labour Party payakaramba kutevedzera zvibvumirano zvepaLanchester House yakakonzera kutorwa kweminda pasina hurongwa hwakakodzera, uyezve munyika maive musina mari zhinji yaikwanisa kumira pachinzvimbo peiyo yaifanira kubva kuMabhiritishi senzira yekutsividza hudzvanyiriri hwehurumende yavo. Izvi zvimwe zvezvinhu zvakakonzera kuti Zimbabwe ive iri pairi nhasi.
Bato reANC riri kutevera mumashure, parizvino richiisa pachena zvirongwa zvekutora minda pasina mubhandaro kuitira kuti vatsividze nekugadzirisa hwusaruraganda rwaiveko mazuva eApartheid. Hapana chakaipa pakuita izvi nekuti vanhu vechitema vazhinji muSouth Africa vanogara muhurombo hwakangofanana nehwavaigara mazuva erusaruraganda. Zvichada kuwonekwa kuti bato iri riri kurevesa here kana kuti kungotaurawo kunobva mukuda kutsigirwa neruzhinji.
Mhuri isinganzwisiswe neruzhinji yekwaGupta nebhangi rakagadzirwa kubva muchirongwa che BRICS renew Development Bank zvinokwanisa kukumbidza mari kuhurumende yeSouth Africa kana vafunga kutora minda.
Zvinoda nguva kuti marizaruti awonekwe. Hakasi kare katakaona South Africa ichizvibhabhatidza mumanyepo e”Rainbow Nation”, awo akaita kuti vanhu vafarire rusununguko rwaiva rwusiri rwechokwadi, vachinyarara kutaura nhau dzakakosha dzakaita sedzerusunuguko mukuita mari. Kuti vanhu vave kutanga kufunga nekutaura nezve nhau idzi chioniso chekuti vanhu vave kumuka, vave kuziva zvakakosha, uye zvinounza vanhu pedyo ne rusununguko chairwo.
ANC yakadzidza zvidzidzo chaizvo chayifanira kudzidziswa ne ZANU PF, uye yakashandisa zvidzidzo izvi zvakakodzere munhau dzeSouth Africa. Kukosha kwayo sebato rakaunza rusunuguko kunowedzerwa kana ikakwanisa kupa vatsigiri vayo rusunuguko rwakazara. Zvichada kuonekwa kuti ANC inokwanisa kuita izvi here. Rusunuguko rwunorevei kana vanhu vasina nzira yekurwurarama?
Tagged ANC policy Conference, Jacob Zuma, Land, Robert Mugabe
UCT SRC denies reports of reshuffle